Sida loo kala qaybiyo oo loogu biiro faylasha Linux | Laga soo bilaabo Linux
Qeybinta iyo ku biirida feylasha Linux waa hawl fudud oo fudud oo noo oggolaan doonta inaan u kala qaadno feylal dhowr faylal yar yar ah, tani waxay naga caawinaysaa marar badan inaan kala jajabino feylasha qaada meel badan oo xusuusta ah, ama inaan ugu rarno qaybaha keydka ee dibadda ama siyaasadaha amniga sida dayactirka nuqulada xogtayada oo kala daadsan oo la qaybiyey. Nidaamkan fudud waxaan u adeegsan doonnaa laba amarro muhiim ah oo kala jaban iyo bisad.
1 Maxaa loo kala jabay?
2 Waa maxay bisadu
3 Sida loo kala qaybiyo oo loogu biiro faylasha Linux iyadoo la adeegsanayo kala iyo bisad
Maxaa loo kala jabay?
Waa a amar nidaamyada Unix taasi waxay noo ogolaaneysaa inaan uqeybino feylal dhowr kuwa yar yar ah, waxay abuureysaa feylal taxane ah oo leh kordhinta iyo isku xirnaanshaha magaca asalka asalka ah, awood u lahaanshaha cabirida cabirka feylasha keenay.
Si loo guda galo baaxadda iyo astaamaha amarkan waxaan ku fulin karnaa kala qaybsanaanta dadka halkaas oo aan ka arki karno dukumiintiyadiisa oo faahfaahsan
Waa maxay bisadu
Dhiniciisa waxaa amar bisad linux wuxuu kuu ogolaanayaa inaad isku duubto oo aad soo bandhigto feylasha, si fudud oo hufan, taas oo ah, amarkan waxaan ku daawan karnaa feylal qoraallo kala duwan waxaan sidoo kale isku dari karnaa feylasha loo qaybiyay.
Si la mid ah sida loo kala qaybiyo ayaan ku eegi karnaa dukumiintiyada faahfaahsan ee bisadda oo leh bisadda ninka.
Sida loo kala qaybiyo oo loogu biiro faylasha Linux iyadoo la adeegsanayo kala iyo bisad
Markaad ogaato aasaaska kala-qaybsanaanta iyo amarrada bisadaha, waxay noqon doontaa mid si fudud u fududahay in la kala qaybiyo oo lagu biiro faylasha Linux. Tusaale ahaan guud ahaan halka aan rabno inaan uqeybino feyl la yiraahdo test.7z oo culeyskiisu yahay 500 mb dhowr faylal 100mb ah, waa inaan si fudud u fulino amarka soo socda:
Amarkani wuxuu soo celin doonaa 5 fayl oo ah 100 mb oo ka dhashay faylka asalka ah, kaas oo yeelan doona magaca splitaa, splitab iyo wixii la mid ah. Waxaa xusid mudan haddii aan ku darno halbeegga -d tilmaamihi hore magaca faylasha soo baxay wuxuu noqonayaa mid tiro ah, taasi waa, loo qaybiyay01, loo kala qaybiyay02 ...
Hadda, si loo mideeyo feylasha aan mar labaad u qeybinnay, waa inaan ka fulinnaa amarka soo socda galka feylasha lagu keydiyay:
Tallaabooyinkan yar laakiin fudud waxaan ku qeybin karnaa kuna biiri karnaa faylasha Linux qaab fudud oo fudud, waxaan rajeynayaa inaad jeceshahay oo aan kugu arki doono maqaal mustaqbalka ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Sida loo kala qaybiyo oo loogu biiro faylasha Linux
Rurick Maqueo Sunta dijo
tani sidoo kale waxay u shaqaysaa faylasha fiidiyowga? Waxaan ula jeedaa haddii aan haysto filim u qaybsan 2 fiidiyow (mid sii socoshada kan kale), miyaan isku dari karaa si aan u yeesho hal fiidyow oo leh dhammaan waxyaabaha ku jira?
Jawaab Rurick Maqueo Poisot
Maya, taasi waa mowduuc kale !!!, waa inaad ku sameysaa tifaftiraha fiidiyowga. Tan waxaa loo isticmaalaa in loo qaybiyo feylal fiidiyoow qaybo badan, ka dibna dib loogu biiro, laakiin tusaale ahaan, suurtagal ma noqoneyso in si gooni ah loo wada ciyaaro dhammaan qeybaha fiidiyowga, maxaa yeelay ma lahaan doonaan madax, fiidiyowga oo dhan waxaa la ciyaari doonaa hal mar oo keliya ku soo biir markale Hadaadan fahmin, markale weydii.
Ku jawaab tatiz
Oh! Aad baad ugu mahadsantahay cadeynta
Linuxero hore dijo
Ka taxaddar amarka bisadda!
Jawab Linuxero hore
Waxaan u maleynayaa inaysan sifiican u shaqeyneynin, maadaama ay kuxirantahay qaabka fiidiyow ee aad isticmaasho, feylka laftiisa ayaa xambaarsan macluumaad ku saabsan mudada fiidiyowga iyo sidoo kale waxyaabo kale, sidaa darteed haddii aad isticmaasho habkan si aad ugu biirto laba fiidiyow, waxay u badan tahay taasi waxay kudareysaa nuxurka feylka labaad midka uguhoreysa heerka xogta, laakiin markaad isku daydo inaad faylka garaacdo, labada fiidiyow si isdaba joog ah looma ciyaari doono, ama waxay ku siin doontaa qalad kujira feylka ama midka ugu horeeya oo kaliya ayaa la ciyaari doonaa, sida haddii aad qaadatay muuqaal dhan iyo qaybaha si gooni ah uma ciyaari kartid labada qaybood.
Ku jawaab mdiaztoledo
Sideen ugu socdaa inaan isku cadaadiyo dhammaan faylasha galka ku jira feylal shaqsiyeed? tusaale ahaan, faylka1 waxaa kujira file1 file2 iyo file3 waxaanan rabaa dhammaantood laakiin shaqsi ahaan feylasha la isku tuuray1.7zizip file2.7zip file3.7zip
Waxay u shaqaysaa sawirada.iso?
Ma ku jiri karaa hal waxoogaa musuqmaasuq hawshan oo waxyeellayn kara faylka?
Markii aan isku dayo inaan kala qaybiyo feyl anigoo adeegsanaya kala qaybsanaan wuxuu ii sheegayaa qalad wax soo saar / soo saar
Maxaan sameyn karaa si aan u xaliyo? 🙁